साथीको विवाहमा जाँदै हुनुहुन्छ ? « Kakharaa
साथीको विवाहमा जाँदै हुनुहुन्छ ?
१ मंसिर, काठमाडौं । मंसिर महिनाको सुरुवातसँगै विवाहको मौसम पनि सुरुवात हुन्छ । आउँदो मंसिरमा पनि कतिले लगनगाँठो कस्ने तयारी गर्नुभएको होला । विवाह भन्नासाथ ब्याण्ड बाजा, जुत्ता लुकाउने, मेहेन्दी जस्ता विभिन्न कुराहरु दिमागमा छाउन थाल्छ । अझ नव विवाहिताहरुको लागि त यो कुनै उत्सव नै हुन्छ । किनभने उनीहरु कसरी राम्रो देखिने, कसरी सबैको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्ने भन्ने मात्र सोचाई हुन्छ र उनीहरुलाई विवाहको कुनै जिम्मेवारी पनि हुँदैन । त्यसैले उनीहरु विवाहको समारोह भरपुर रमाइलो गर्छन् ।
अझ कुरा आफ्नो मिल्ने साथीको विवाहको छ भने त झन् सुनमा सुगन्ध नै थपिन्छ । यो अवसरमा दुलाहा–दुलहीपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति नै तपाईं हुनुहुन्छ । विवाहको समारोह त्यसबेलासम्म रमाइलो हुन्छ, जबसम्म आफ्नो लगनगाँठो कसिँदैन । यदि तपाईं दुलहीको मिल्ने साथी हुनुहुन्छ भने त झन् तपाईंको लागि यो विवाह निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईं धैर्यतापूर्वक र कुनै तनावबिना हरेककुरामा सबैभन्दा अगाडि–अगाडि हुनुहुनेछ । सबै अधैर्य र चिन्तामा भएको समयमा पनि तपाईं आफूलाई शान्त राख्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको यही कुराले तपाईंलाई विशेष पाहुुना बनाउँछ ।
सुनियोजित विवाहलाई पनि सफल बनाउन सजिलो छैन । यसको लागि सबै बस्तुहरु राम्रो र गम्भीरतापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । यति हुँदा–हुँदै पनि बस्तुहरु यताउता हुनसक्छ र यस्तो समयमा तपाईंको भूमिका अहम हुन्छ । जसो–जसो विवाहको दिन नजिकिँदै जान्छ । त्यसरी नै तपाई आफ्नो साथीभन्दा एउटा व्यक्तिगत सहयोगी, काउन्सिलर, फोटो खिच्नेहरु, सँगै उभिने साथी र सन्देश पु¥याउने युवतीको भूमिकामा ढल्दै जानुहुन्छ । यस बाहेक दुलहीको हरेक स–साना आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि तपाईं तयार हुनुपर्छ । तपाईंको जिन्दगीमा केही हप्ताको लागि अल्पबिराम लाग्न पनि सक्छ । किनभने विवाहबाहेक अरु केही सोच्ने तपाईसँग समय नै हुँदैन । यहाँ दिएका केही जानकारीहरुले तपाईलाई आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डसँग उनको राम्रो–नराम्रो समयमा साथ निभाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
तपाईंले आफ्नो साथीको विवाहको खबर पाएपछि उनको अगाडि हरसम्भव सहयोगको लागि उपस्थित हुनुपर्छ । तपाईंको यो कुराले तनाव र व्यस्त भावी दुलहीलाई ठूलो राहत साबित हुन्छ ।
योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ
सबैभन्दा आवश्यक कुरा तपाईं छिटोभन्दा छिटो उनको योजनामा समावेश हुनुपर्छ । तपाईंले सोचे जस्तो भएन भनेपनि तपाईं आफ्नो साथीको विवाह हो भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । विवाह हुन लागेको साथीले पहिला जसरी तपाईंको कुरा अथवा सल्लाह सुनेर खुशी हुन्थिन् । अहिले पनि त्यसरी खुशी भइनन् भने पनि तपाई निराश हुनु हुँदैन । विवाह भनेको हरेक युवतीको लागि उसको जिन्दगीको महत्वपूर्ण खुट्किला हो भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।
झगडा भयो भने सुल्झाउनुपर्छ
तपाईंले यो समयमा निभाउने महत्वपूर्ण भूमिका भनेको नै संकटको व्यवस्थापन हो । यदि फूल ल्याउने व्यक्तिले तपाईंको साथीलाई मनपर्ने फूल पाएन भने तपाईंले कि त उसलाई जहाँकाहीँबाट पनि साथीलाई मनपर्ने फूल ल्याएर घर सजाउन भन्नुपर्छ कि भने तपाईं आफ्नो साथीलाई फकाएर अन्य फूलले घर सजाउनको लागि तयार पार्नुपर्छ । यो तपाईंको लागि चुनौतीको कुरा हुन्छ । तपाईंले यो काम पूरा गर्नको लागि धेरै मेहिनत गर्नुपर्छ ।
सुन्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ
तपाईंले त्यस्तो महिला बन्न पर्ने हुनसक्छ । जसले हरेक समस्या र दुःखले भरिएको प्रश्नहरुको जवाफ दिनको लागि तयार हुनपर्छ र तपाईंले दुलहीको परिर्वतनशील मनस्थितिको पनि साक्षी बन्नुपर्ने हुन्छ । भविष्यकी सासुको हरेक कुरामा रोकतोकदेखि हनिमुनको लागि तपाईंको साथीको मन पर्ने ठाउँ छान्ने जस्ता धेरै तीता–मीठा कुराहरु र ठूलाठूला समस्याहरु छिटै नै तपाईं अगाडि आउँछन् । जसलाई तपाईंले धैर्य भएर सुन्नुपर्छ ।
तपाईंले सबै महत्वपूर्ण सर्भिस प्रोभाइडर्सको सूची राख्नुपर्छ । गीत–संगीतदेखि फोटोग्राफरसम्म सबैको नम्बर तपाईको फोनमा सेभ हुनुपर्छ । आफ्नो साथीको समय र उर्जा दुबै यस्तो व्यक्तिहरुसँग व्यवहार गर्नको लागि खर्च हुन दिनु हुँदैन ।
महत्वपूर्ण कामको लागि तयार हुनुपर्छ
स–साना कामको लागि तयार हुनुपर्छ । टेलरलाई नाप लिनको लागि ब्लाउज दिने जस्ता विभिन्न किसिमको कामको लागि उपस्थित हुनुपर्छ । हरेक कामको लागि हुन्छ भन्नुपर्छ र छिटो हुने सवारीसाधन प्रयोग गरेर आउने जाने गर्नुपर्छ ।
पैसा हेरेर खर्च गर्नुपर्छ
विवाहको तयारीमा तपाईंले आफूसँग भएको पैसा पनि खर्च गर्नु पर्ने हुनसक्छ । यी सबैको हिसाब र बिलहरु सम्हालेर राख्नुपर्छ । एउटा कुशल साथीले आफ्नो विवाहमा तपाईंको पैसा खर्च होस् भन्ने चाहन्नन् र उनले तपाईंको पैसा फिर्ता गर्ने पूर्ण कोसिस गर्नेछिन् ।
आफ्नो साथीलाई साथ दिनुपर्छ
तपाईंले आफ्नो जिन्दगीलाई केही दिनको लागि बिर्सनुपर्ने हुन्छ । तपाईंको साथी जुन परिस्थितिमा छिन् । त्यो समयमा तपाईंको हालखबर सोध्ने उनीसँग समय नहुन पनि सक्छ । उनलाई केही महिनाको समय दिनुपर्छ । त्यसपछि उनी पुनः तपाईंकी उही पुरानो साथी जस्तै व्यवहार गर्न थाल्छिन् ।